म देशको लागि ज्या’ न दिन तयार छु, आबश्यक भए कालापानीमा गएर झुण्डिन-तयार छु -बर्षा राउत (भिडियो) « Nipolnews
म देशको लागि ज्या’ न दिन तयार छु, आबश्यक भए कालापानीमा गएर झुण्डिन-तयार छु -बर्षा राउत (भिडियो)
चर्चित नायिका वर्षा राउतले आफूले एक शब्दपनि नेपाल र नेपालीहरुको विरुद्धमा नबोलेको स्पष्ट पारेकी छिन् । नेपाल भारत सिमा विवादको सवालमा आफूले कुटनीतिक रुपमा दुवै देशका अधिकारी बसेर वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेको पनि उनको भनाई छ । आइतबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलसँग कुरा गर्दै नायिका राउतले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्-‘भोलि हाम्रो भूमि रक्षाको लागि मर्नुपरेपनि म तयार छु । ज्यान दिन तयार छु । म यही देशमा हुर्किरहेको छु । विदेशको पिआर लिएको छैन्। यही देशमा बस्छु । यहीँ काम गरिरहेको छु । यही देशमा बाँच्छु, यही देशमा मर्छु । विदेशमा गएर बस्ने मेरो सोचपनि छैन् । जो जसले जे जे भनिरहनुभएको छ, त्यो १५ सेकेण्डको भिडिओले मिसकम्युनिकेशन भैरहेको जस्तो लाग्छ क्या । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति हलुका शब्द प्रयोग गरेकोले मैले अहिले सजाय पाईरहेको छु ।’
तपाईको अन्तरर्वार्ता किन विवादमा पर्यो ? भन्ने धमलाको सुरुवाती प्रश्नमा उनले भनिन्-‘अब हेर्नुहोस मेरो ३० मिनेट लामो ईन्टरभ्यु थियो । त्यसमा १५ सेकेण्डको भिडियो राखेर, मैले बोलेको शब्दले मान्छेहरुको सेन्टिमेन्ट्सँग ठेस पुगेको छ । त्यसले गर्दा अलिकति विवादमा आईरहेकोजस्तो लाग्यो मलाई ।’
उनले आफूले साथीको सवालमा बोलेको कुरा स्मरण गराउँदै भनिन्,’भारत र नेपालबीच एकदमै पूरानो सम्बन्ध छ । ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । साथीको, मित्रताको सम्बन्ध छ । त्यो सन्दर्भमा जोड्न खोजेको थिएँ । यो सोसल वारहरुले गर्दा हाम्रो पूरानो मित्रतामा असर पर्न जान्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिन खोजेको थिएँ । तर, मैले बोल्दाखेरि अलिकति केही भाषा नमिलेको कारणले गर्दा अहिले जनताहरुले अलिकति नराम्रो रुपमा लिनुभएको हो ।’
आफूले भारतको पक्षमा नबोलेको र साथ पनि नदिएको राउतले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,’मैले के भनेको थिएँ भने नेपाल र भारत दुवै सरकारले मिलेर कुटनीतिक तवरले यो ईस्युलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । हामीसँग एभिडेन्स छन् । प्रुफ छन् । त्यसले गर्दा झगडा गरेर हाम्रो सिमाना किन मिचिस भनेर भन्नै पर्दैन क्या । किनभने हामीसँग बलियो प्रमाण र तथ्यहरु छन् नि ।’
फरक प्रसँगमा राउतले लकडाउनको समयमा आफू घरायसी काममा नै व्यस्त रहने गरेको पनि सुनाईन् । उनले भनिन्,’घरायसी काम भनदादेखि अलिक बढि मय भान्साको काममा नै बित्छ । युट्युबमा कस्तो कन्टेन्ट हाल्ने भन्नेबारे ? सञ्जोगसँग छलफल हुन्छ । खाना पकाउने कुरा गर्दा म प्रायः सबै परिकार पकाउँछु । रेगुलर पकाउँछु । यसको अलावा टिभी हेर्ने, फिल्म हेर्ने गरेको छु । अहिलेसम्म आफ्नै चलचित्र हेरेको छैन् । मैले अहिलेसम्म ९ वटा चलचित्र गरें । मेरो लागि सबै चलचित्र उत्तिकै प्यारा छन् । जनताले मन पराउनुभएको मेरो विचारमा छक्कापञ्जा हो । जात्रैजात्रा पनि मनपराउनुभएको छ ।’
काठमाण्डौ, असार २३ । केही समयदेखि चर्चित कलाकारहरु गुमाइरहेको बलिउडले थप एकजनालाई गुमाएको छ ।
सुशान्तको अन्तिम फिल्मको ट्रेलरले रिलिज भएको ९८ मिनेटमै बनायो विश्व रेकर्ड, १ दिन नपुग्दै ट्रेन्डिङको दोस्रो स्थानमा, २ करोड बढीले हेरे (भिडियो)
काठमाडौ, असार २३ । सोमबार रिलिज भएको बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको अन्तिम फिल्म
दिपश्रीलाई महानायक राजेश हमालले दिए मुखभरीको कडा जवाफ (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यतिबेला विवाद उत्पन्न गर्ने थलो भएको छ । कोरोना भाइरस